China Universal TV Wall Mount B27 mveliso kunye nabenzi | Zeno
Umzekelo No.: B27
Uhlobo lokunyuka: I-Mount Mount
Uhlobo lwentshukumo: Ilungisiwe
Izinto eziphathekayo: SPCC
Ubungakanani beTV: 42 intshi
Ubuncinci bobukhulu obuhambelanayo: 32 intshi
● I-B27, iProfayili ephantsi ye-TV elungisiweyo, ilingana ne-14 ″ -42 ″ intshi, eyenze ukuba abathengi bakwazi ukufaka i-TV yabo ekhaya ngokwabo ngexesha elikhawulezayo. Abathengi banokuxhoma ngokulula i-LCD yabo yonke, umboniso we-LED kwityeni yodonga ukuze ifakwe ngokukhawuleza. Kananjalo abathengi banokutyibilika kwiscreen sabo ngaphakathi kwipleyiti eludongeni ngokukhululekileyo ukuze balingane ii-engile zabo zokubukela ezithe tyaba.
● Uyilo lweprofayile esezantsi lwenze ukuba iplati yeplathi yeflethi esondeleyo isondele eludongeni, kuphela ngumgama we-34mm eludongeni. Ukufakwa ngokulula nangokukhawuleza kunye nokudibanisa kwenza ukuba iintsapho zakho zive zilunge ngakumbi ukuphuma kweTV yakho kwindawo eyahlukileyo, gcina isibini kwisithathu sokufaka ixesha kunalo naluphi na olunye udonga lwendonga.
● Ngomthamo wehardware, indibano encinci, kunye nokufaka ngokukhawuleza ngokukhawuleza, uya kuba neTV yakho eludongeni ngaphantsi kwemizuzu engama-30.
● Ngaba ikhona into esingakhange siyicinge? Cofa inkqubo yokhuseleko olukhiyekileyo yenza 'ucofe' ngokwanelisayo xa iTV yakho ikhuselekile eludongeni. Ukukhupha iintambo ngokukhawuleza kukhupha i-TV ukuze ukwazi ukufikelela ngokulula kwiintambo.
● Uyilo olubanzi lodonga lwendonga lusebenza ngeewindows eziyi-16 kunye ne-24 ″. Le ntaba nayo inokufakwa kwikhonkrithi kunye neendonga zebloko lekhonkrithi.
● Iyahambelana nazo zonke iimveliso eziphambili zeTV kubandakanya iTCL, Samsung, LG, Vizio, kunye nokunye. Kwi-Echogear, sineengcali zeentaba zeTV ezilungele ukunceda iintsuku ezisi-7 ngeveki.
Misela kwaye ulibale. Eyona nto iphambili ekunyukeni ngokulula kweTV.
Ukuba ufuna i-TV inyuswe kwindawo enye engadingi kujika okanye ukujija le yeyona ntaba ifanelekileyo kuwe.
Kuba ayifuni kuhamba, ineprofayile esezantsi, ke intaba ayibonakali eludongeni. Abahlobo bakho baya kucinga ukuba kuyamangalisa ngomlingo xa besiza, njengoWingardium Leviosa. Olu hlobo lwentaba lukwanele uluhlu olubanzi lweepateni ze-VESA, ukuphucula ukuhambelana kwayo neempawu zeTV ezinje ngeSamsung, Vizio, kunye neSony.
Ukusondela kakhulu eludongeni kunesiphoso esinye esikhulu, kunzima ukufikelela kwiintambo zakho. Ngethamsanqa, ezethu zinentambo zokutsala ukuvula i-TV ngokulula ukusuka entabeni, ukuze ufike kwiintambo zakho ngaphandle kokuthatha i-TV iphela, ukongela ixesha. Kwaye sonke siyazi ukuba ixesha yimali, imali ngamandla, amandla ipitsa, kunye nepitsa lulwazi.
Kungenxa yokuba intaba ayifuni kuhamba, ikwalolona khetho lukhetho luhle kakhulu kwaye lolona lula ukulunyusa.
Ukungqinelana kweVESA: 100 × 100, 200 × 100, 200 × 200,
Lateral Shift ?: Ewe
Izitshixo ezifunekayo: 2
Ukuhambelana kodonga: I-16 ″ okanye i-24 Wood kwiZiko leZitudi zeWood kunye neKhonkrithi
Ulwakhiwo: 100% yeBanga eliPhakamileyo leNsimbi
Inkcazo eneenkcukacha ye B27:
Ingena: 14 ″ -42 ″
Ukulayisha amandla 25kg
Umgama eludongeni: 24mm + 10mm
Ibhokisi engaphakathi: 29.7 * 20 * 2.3cm
Ibhokisi engaphandle: I-54 * 31.5 * 22cm
Okulandelayo: Intaba eguqulwayo yeTV yeTV yokubeka ii-TV ezingama-32-70 intshi
Ukucheba iNtaba yeTv Wall